Lọ ọrụ ika dị na yrgbọ njem Kyrgyzstan | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMediterranean Region33 MersinBlọ ọrụ ika dị na yrgbọ njem Kyrgyzstan
15 / 01 / 2020 33 Mersin, Mediterranean Region, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Akwụkwọ Ozi Okwu Mmalite, Turkey
ụlọ ọrụ ika na ụgbọ njem kyrgyzstan
Ngalaba na-ebugharị ụgbọ mmiri anọworị na oge ọrụ n'aka na mmụba maka mbupu na mbubata data n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Mba anyị, nke nwere mmekọrịta azụmahịa na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba niile nke ụwa, ọkachasị na Europe, Eshia na Middle East, na-agbadokwa mba ndị Eshia mgbe ọmụmụ mmụta Europe zuru oke. N’oge na-adịbeghị anya, etinyerela ihe ndị dị mkpa na mbupụ na mbubata nke mba Eshia, ọkachasị ndị a na Kyrgyzstan, ngalaba ndị na-ebugharị njem agagharikwa otu ahụ.
Na mba anyị, ụlọ ọrụ ngwa agha na-arụ ọrụ na mba Eshia na Kyrgyzstan abanyela n'ọmụmụ ihe dị iche iche. Agbanyeghị, ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ lọjistik ahụ anọworị na eriri Kyrgyzstan site n'oge gara aga ruo taa, ha na-arụsi ọrụ ike n'usoro a. Otu n'ime ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ụgbọ njem na-aga n'ihu na Kyrgyzstan bụ Shah Global Logistics. anyị ụlọ ọrụ Companieslọ ọrụ na-ebufe Kyrgyzstan Ebe ọ bụ na ọ bụ otu n'ime òtù ndị na-adịghị ahụkebe n'etiti ọmụmụ na ọrụ dị oke egwu, ọ na-ebugharị ụgbọ njem nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na ịzụ ahịa mba ọzọ na mba anyị.
ụzọ iga ụlọ ọrụ, nke tumadi awade si Turkey na Kyrgyzstan na-arụ-arụsi ọrụ ike na ọrụ anyị na ikuku na okporo ígwè iga ina. Na mgbakwunye na ịrụzu ihe eji ebu ibu na ebubata ụzọ, na-enyekwa ụfọdụ ọrụ ụgbọ njem n'ụbọchị ụfọdụ n'izu, ma ọ bụrụhaala na ọ ga-apụ n'ụlọ nkwakọba ihe nke Istanbul, yana nnukwu ụgbọ njem, ụgbọ njem friji, ụgbọ njem na akpa ụgbọ mmiri na-emeghe. Vehiclesgbọala anyị, nke enwere ike ịhazi ibu site na obodo anyị niile, na-arụ ọrụ ụgbọ njem echekwabara na njedebe nke mkpuchi CMR n'okpuru njikwa ndị ọkwọ ụgbọala nwere ahụmahụ na ndị otu ọkachamara na-arụ ọrụ.
Na mgbakwunye na ọrụ lọjistik, ụlọ ọrụ anyị nwere ọrụ n'ọhịa nke arụmọrụ ọdụ ụgbọ mmiri, nhichapụ omenala, nchekwa na ụlọ ọrụ. Ppinggbọgharị na Kyrgyzstan Site na ahụmịhe ya ọ nwetara site n’oge gara aga, ọ na-achịkwa akụrụngwa nke ukwuu site na ntinye aka rue mbupu nke ibu. A na-enyocha arịrịọ niile sitere na Kyrgyzstan na ụlọ ọrụ anyị n'otu ntabi anya ma na-enye nloghachi nke usoro nke ụgbọ mmiri kachasị mma na ọnọdụ njem n'oge obere.
Ozi Ntaneti: Ulo oru
Na mmecha ihe owuwu nke China-Kyrgyzstan-Uzbekistan Railway ın
Onye isi ala, “Ndị na-emegide China-Kyrgyzstan-Uzbekistan Railway Construction…
Mkparịta ụka ndị e mere na Kyrgyzstan-China na-ewu ụgbọ okporo ígwè
China-Kyrgyzstan-Uzbekistan Usoro ụgbọ okporo ígwè Trans-Asia malitere
China-Kyrgyzstan-Uzbekistan ụgbọ okporo ígwè na-amalite na 2014
Kyrgyzstan rịọrọ maka ebe ndị ụgbọala na-echere na Uzbekistan
Kyrgyzstan jụrụ ọrụ ụgbọ okporo ígwè China
Kyrgyzstan chọrọ ka China na-arụ ọrụ ụgbọ okporo ígwè
A na-edozi nsogbu ụgbọ ala ụgbọala dị n'etiti Kazakhstan na Kyrgyzstan
China-Kyrgyzstan-Uzbekistan ụgbọ okporo ígwè na-amalite na 2016
China choro imezi ihe owuwu okporo ígwè China-Kyrgyzstan
Partlọ ọrụ Jordan Partial Transport Brand
Ogige 600 na-ebu ibu na mmanụ ụgbọala na Kyrgyzstan
mepere njem ụgbọ mmiri
Ah Global Logistics
truckgbọ njem friji
Ppinggbọgharị na Kyrgyzstan
Companieslọ ọrụ na-ebufe Kyrgyzstan